Miyabi Monaka Fonosana Mofomamy Mofomamy - Famolavolana
Fonosana Mofomamy Mofomamy
Fonosana Mofomamy Mofomamy Ity dia endrika fanamboarana fonosana amin'ny mofomamy mofomamy feno fonenan-tsaramaso. Ireo fonosana dia namboarina niaraka tamin'ny firesaka tatami mba hamongorana ny efitrano japoney. Izy ireo koa dia tonga miaraka amin'ny famolavolana endrika fonosana randrana, ankoatra ny fonosana. Izany dia nahatonga ny (1) haneho afom-by nentim-paharazana, endri-javatra tokana amin'ny efitrano fanaovana dite, ary (2) mamorona efitrano dite amin'ny 2-mat, 3-mat, 4.5-mat, 18-mat ary ny habeny hafa. Ny lamosin'ny fonosana dia voaravaka sary ankoatra ny motera tatami ka azo amidy mitokana.
Anaran'ny tetikasa : Miyabi Monaka, Anaran'ny mpamorona : Kazuaki Kawahara, Anaran'ny mpanjifa : Latona Marketing Inc..
Fonosana Mofomamy Mofomamy Kazuaki Kawahara Miyabi Monaka